Fintech Corporate Fun Store ကို စတင်တည်ထောင် သူသည် ယခုအခါ Chuntyin တွင် Prefabricated ဟင်းလျာ များကို ရောင်းချ နေသည် – Pandaily
Fintech Corporate Fun Store ကို စတင်တည်ထောင် သူသည် ယခုအခါ Chuntyin တွင် Prefabricated ဟင်းလျာ များကို ရောင်းချ နေသည်
Jun 16, 2022, 16:19ညနေ 2022/06/16 23:40:31 Pandaily
Luo Min သည် ဘဏ္ technology ာရေး နည်းပညာ ကော်ပိုရေးရှင်း စတိုးဆိုင် ကို တည်ထောင်သူ ဖြစ်သည်၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နယူးယောက် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် စာရင်းဝင် ခဲ့သော ကုမ္ပဏီသည် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ခဲ့ပြီး အဓိကအားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ ကြိုတင် ချက်ပြုတ် ထားသော ဟင်းလျာ များ ကိုမြှင့်တင် ရန်ဖြစ်သည်။
Luo ဟာ နာမည္ေက်ာ္ ဟင္း လ်ာ ေတြရဲ႕ သမိုင္း ကို ကၽြမ္းက်င္ စြာ မိတ္ဆက္ ေပးခဲ့ၿပီး သူနဲ႔ မရ င္း ႏွီး တဲ့ အင္တာနက္ သံုးစဲြ သူေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ ေပးခဲ့ၿပီး “ သူဟာ New Oriental Education ကို တည္ေထာင္သူ Yu Minhong လို စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္း ေနၿပီ” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဇွန်လ ၁၃ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Fun Store ၏ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ကုမ္ပဏီ သည်ယခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ ယွမ် ၂၀၁. ၈ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၃၀) ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် အလားတူ ကာလက ယွမ် ၅၁ ၅. ၇ သန်းမှ ၆၀. ၉% ကျဆင်းခဲ့သည်။ ဇွန်လ ၁၅ ရက်အထိ Fun Store ၏ စတော့ရှယ်ယာ ဈေး နှုန်းသည် ၁ ဒေါ်လာ အောက် သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။
ပျော်စရာ စတိုးဆိုင် ၏ စတော့ရှယ်ယာ ဈေး နှုန်းသည် စာရင်းဝင် သည့်နေ့ တွင်ဒေါ်လာ ၃၄. ၃၅ သို့ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၄၃% ကျော် မြင့်တက်ခဲ့ပြီး စျေးကွက် တန်ဖိုး မှာဒေါ်လာ ၁၁. ၃ ဘီလီယံ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ခြောက် လအတွင်း ၎င်း၏ စတော့ရှယ်ယာ ဈေး နှုန်းသည် ၁၀ ဒေါ်လာ အောက် သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ စတော့ စျေးနှုန်း အလွန် နိမ့် သောကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် delisting သတိပေးချက် ကိုပင် ရရှိခဲ့သည်။
ယခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ် တွင်၎င်း၏ ဘဏ္ revenue ာရေး ၀ င်ငွေသည် ယွမ် ၁၇ ၇. ၉ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ယမန်နှစ် အလားတူကာလ က ယွမ် ၃၆ ၁. ၈ သန်းမှ ၅၀. ၈% ကျဆင်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ချေးငွေ လွယ်ကူချောမွေ့ စေရေး ၀ င်ငွေ နှင့်အခြား ဆက်စပ် ၀ င်ငွေ များသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် ယွမ် ၁၂. ၂ သန်း နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၉၆. ၁% မှ ယွမ် ၅၀၀ ၀၀၀ သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။
Luo Min သည် ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍ ပျော်စရာ စတိုးဆိုင် ၏ စျေးကွက် တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံ မရောက် မချင်း ကုမ္ပဏီ ထံမှ လစာ နှင့် အပိုဆု ကြေးများ ကိုလက်ခံရရှိ တော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ယခင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ပျော်စရာ စတိုးဆိုင် များ၏ စျေးကွက် တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၅၀ သာရှိ ခဲ့ပြီး ပထမ နေ့တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁. ၃ ဘီလီယံ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။
ပျော်စရာ စတိုး သည် ကောလိပ်ကျောင်းသား များအား ချေးငွေ များပေး ခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်း သူများက ပိုမို တင်းကြပ် သော ကြီးကြပ် မှုနှင့် ရင်ဆိုင် ခဲ့ရသည်။ အဖြူ ကော်လာ လုပ်သား များအတွက် ချေးငွေ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် Alipay နှင့် Sesame Credit တို့နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုသည် ဖောက်သည် အမြောက်အများ ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ကြီးကြပ်မှု အောက် ၌ပင် ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေနှင့် အသားတင် အမြတ် သည် ၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၉ အထိ နှစ်စဉ် အထက် သို့တက် နေဆဲဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှစ၍ ၎င်း ၏စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှ ၀ င်ငွေ ကျဆင်း လာသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ Luo Min သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကား လက်လီ ရောင်းဝယ် မှု၊ ၂၀၂၀ တွင် ဇိမ်ခံ e-commerce ပလက်ဖောင်း Wanmiu နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် K12 ပညာရေး အပါအ ၀ င် နယ်ပယ် များစွာကို စူးစမ်းလေ့လာ ရန်ကြိုးစား ခဲ့သည်။ အားလုံး မအောင်မြင် ပါ။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Ruixing ကော်ဖီ ဥက္က chairman ္ဌ ဟောင်း Charles Lou သည် Prekuk သို့ဝင်ရောက် ခဲ့သည်D ဟင်း ပွဲ စျေး
ယခုနှစ် မေလတွင် Luo Min သည်သူ၏ ပထမဆုံး ဗီဒီယို ကို Chunyin China Version တွင် တင်ခဲ့သည်။ Luo ၏ ရုပ်သံလိုင်း မှ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု အများစုသည် ကြိုတင် ချက်ပြုတ် ထားသော ဟင်းလျာ များကို အာရုံစိုက်သည်။ IiMediaResearch မှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ ကြိုတင် ချက်ပြုတ် ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက် စျေးကွက် သည်ယွမ် ၃ ၄၅. ၉ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၉. ၈ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀ ၂၆ ခုနှစ်တွင် စျေးကွက် သည်ယွမ် ၁, ၀ ၇၂ ဘီလီယံ ရရှိ မည်ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်တွင် စျေးကွက် ကြီးထွား မှုနှုန်းကို မြင့်မားစွာ ထိန်းသိမ်းထား မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Fast Jet Alliance “2021 Super Partnership Programme ” ကို Union
အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့ Eco Conference မှာ တရုတ်ရဲ့တိုတောင်းတဲ့ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းကို Fast Hand Operation Alliance က ကမကထပြုတဲ့ “၂၀၂၁ Super Partnership Programs”, Gadget, Game, Video Info, ဝတ္ထု စတာတွေပါတနာတွေက ယွမ်သန်းရာနဲ့ချီတန်တဲ့ အရင်းအနှီးတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခံစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။